Sonder | Kensington Gardens | Igumbi leKumkanikazi eliphangaleleyo
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSonder (London)
Ngena ngamanyathelo angaphambili eKensington Gardens, apho iikholamu ezintle kunye neefestile ezihonjisiweyo ezihonjisiweyo zamkelekile ngesitayile. Beka iibhegi zakho kwigumbi lakho eliyilwe ngobuchwephesha ngaphambi kokuba ujonge izitrato ezintle zaseKensington, ezinezindlu ezicocekileyo zeVictorian ezibonisa imisebenzi yentsimbi entsonkothileyo. Thatha i-rose latte kwi-Ore Cafe ngaphambi kokuba ubukele utshintsho oluqhelekileyo lwabalindi eBuckingham Palace. Chitha emva kwemini eHyde Park, enamakhulu eehektare zegadi ezichumileyo ezihonjisiweyo kunye nekhaya kwisikhumbuzo sikaPrincess Diana. Njengoko kuqalisa ukuhlwa, yiya kwi-Champion Pub apho unokonwabela intlanzi ekrwada kunye neetshiphusi ezinepinti yomkhenkce njengoko ufudumala kufutshane neziko.
Ukusebenza, ukuphumla, ukuhlala. Iindawo zethu zinazo zonke ezinye izinto ezibalulekileyo ozidingayo ukuze uhlale.
- Qhagamshelana-free check-in
- 24/7 inkxaso virtual
- Iitawuli ezitsha kunye nezinto zokuhlambela eziyimfuneko
-Ukucoca kwangaphambili ngaphambi kokufika kwakho
-Imizuzu emi-3 ukuhamba ukuya ePubliq. (igugu elifihliweyo elilungele ukwabelana ngokulunywa ngokuyilayo)
-Imizuzu emi-3 ukuhamba ukuya eHjem Kensington Cafe (eyaziwa ngecoconut matcha scones kunye neekofu ezenziwe ngesandla)
-Imizuzu emi-5 yokuhamba ukuya kwi-Gloucester Arms (i-pub engaphelelwa lixesha enikezela ngeepayinti zomkhenkce)
-Imizuzu emi-5 yokuhamba ukuya eKensington Palace kunye neeGadi
-Imizuzu eli-10 ukuhamba ukuya eHyde Park
Sineendawo ezininzi kule ndawo, nganye iyilelwe ukukunika indawo entle yokuhlala-ngelixa isitayile sethu sihambelana, imbonakalo, uyilo, kunye noyilo lunokwahluka.
Ikhaya kwiimyuziyam ezikumgangatho wehlabathi kunye namakhaya amangalisayo exesha lama-Victori, iKensington yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhweba kwindawo ephithizelayo yokuphumla okuncinci. Iyaziwa ngezitrato zayo ezintle, le ngingqi inomtsalane izaliswe ziivenkile ezikwinqanaba eliphezulu, iibhari ezinefashoni, kunye neendawo zokutyela ezibonelela ngokutya okumnandi kwehlabathi. Chitha imini uhlola i-Hyde Park, ineegadi ezintle zaseKensington, okanye ubambe ikofu e-Hjem ukuze uhlaziye kwaye uthenge kwisitalato esiphakamileyo sase-Kensington. Ngelixa undwendwela le ndawo yasentshona yeLondon, gcina ixesha lokuthatha isiselo kunye nokutya kwi-pub kwi-Builder's Arms.
Umbuki zindwendwe ngu- Sonder (London)
Izimvo eziyi-2 612
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R8466
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Greater London